juillet | 2009 | Zouboon
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 8:13
Nandritra ny fandalovan’ny filoha teo aloha Zafy Albert teto Mahajanga ny Alarobia 29 jolay tolakandro lasa teo dia maro ireo olona tonga nanotrona azy tao. Zavatra maro amin’ny fitondrana ankehitriny mantsy no nitondran’ity filoha teo aloha ity fanazavana. Isan’izany ny nilazany fa tsy mbola izy ny fitondrana tetezamita misy ankehitriny. Satria tsy mbola misy fifanarahana mazava tsara misy, mipetraka mamehy ny fitondrana ankehitriny dia tsy mbola fitondrana azo ekena ny fitondrana tetezamita. “Raha tsy voasonia ny fifanarahana dia tsy hisy fanjakana ara-dalana”, hoy ity filoha teo aloha. Midika izany fa tsy mankasitraka ny fitondrana misy amin’izao fotoana izay ny mpanara-dia ny an’Andriamatoa Zafy Albert. Fantatra ihany koa nandritra io valan-dresaka natao io, fa isan’ny antony tsy mbola hahavitana sonia hatramin’izao ny fifanarahana tokony hatao ny tsy fankatoavan’ny mpanara-dia ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina. “Matoa hatramin’izao mbola tsy voasonia ny fifanarahana dia satria tsy manaiky hanao izany ny manara-dia avy amin’ny antoko TGV”, hoy ihany izy. Raha araka ny fanazavany ihany dia fantara fa noho ny tsy fankasitrahan’ny fitondrana ankehitriny ny famelan-keloka no antony lehibe tsy aneken’ireo mpanara-dia ny filoha ankehitriny izany fanaovan-tsonia izany. “Matahotra ny valifaty mety hataon’ireo gadra pôlitika ny fitondrana Andry Rajoelina”, hoy Andriamatoa Zafy Albert hentitra dia hentitra tokoa. Ny antoko manaraka ity farany mantsy dia manaiky tanteraka ny famelana ireo gadra pôlitika. Midika izany hoy ihany ity filoha teo aloha fa misy zavatra tsy mazava ao anatin’io fitondrana io. Tsiahiavina ihany anefa fa tamin’ny talata 22 jolay lasa teo no nihaona ireo filoha roa ireto dia ny filohan’ny tetezamita ankehitriny Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Zafy Albert. Najanona ho tsiambaratelo anefa izay rehetra nifampiresahan’izy roa mianaka tao.
ZAFY ALBERT FANJAKANA FEDERALY IHANY NO AFAKA HAMPANDROSO NY FIRENENA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 1:54
Maro ireo fokoto-kevitra nambaran’ny filoha teo aloha Zafy Albert tamin’ny mponin’ny Mahajanga tamin’ny fandalovany teto an-toerana ny alarobia 29 jolay lasa teo. Isan’izany ny nanambarany ampahibemaso fa ny federalisma no vahaolona mahomby indrindra ho an’ny fampandrosoana an’i Madagasikara manomboka izao. “Nandritra ny 50 taona izay isika nilona tao anatin’ny fanjakana tokana hatrany, tsy nisy zavatra niova fa ny teo ihany no teo” hoy ity filoha teo aloha ity nanazava. Midika izany araka ny heviny fa tsy tokony hijanona amin’izany intsony isika ankehitriny. Araka ny famaritana ny federalisma nomen’i henri Lecacheur izay nanara-dia azy dia ny federalisma no endrika fanampariaham-pahefana farany mivelatra indrindra amin’ny fitondrana firenena iray. Raha tiana hizara izany ny fitondrana dia fanjakana federaly no tokony hajoro. Midika ihany koa izany fa ny federalisma no ahafahana mampandray anjara feno ny faritra amin’ny fampandrosoana. Tokony hozaraina isam-paritra izany ary samy hanana ny fahefany ny faritra tsirairay. Nampahafantarina koa tamin’io fa faritra 16 ao anatin’ny 22 misy eto Madagasikara no efa manaiky io firehan-kevitra io. Midika izany fa mankasitraka ny fanjakana federaly ny ankamaroan’ny Malagasy. Hatramin’izay ka hatramin’izao mantsy dia miantehitra amin’ny fanjakana foibe ny fivelomana ara-bolan’ny faritra rehetra. Ny 93% ny vola ampiasaina amin’ny fampandrosoana dia ao no mivangogo. Raha izay anefa no mizarazara aty amin’ny faritra tsirairay dia inoana fa hiroborobo ny toe-karena, noho izany handroso I Madagasikara. Tsy izy intsony izany ny fitondrana manao vahoho fahefana teo aloha. Ny fitondrana tokana na ny “Etat unitaire” dia avela tanteraka amin’izay. Ohatra akaiky hoy ity filoha teo aloha ity ny any Amerika sy any Suisse ary ao Allemagne, tsy misy firenena mandroso miohatra ireo firenena telo ireo noho izy ireo mampihatra ny fanjakana federaly ao aminy. Ny fanontaniana mipetraka anefa dia ny hoe, hahay sy hahazaka izany fitondram-panjakana izany ve ny malagasy ? Ary sao sanatria fanajakana federaly mbola hilona amin’ny fitiavan-tena sy famenoana paosy indray. Te handroso ny vahoaka Malagasy, ary manaiky izay fitondrana mitondra azy mankany amin’izany faniriany izany. Ny mangarahara anefa no ambadik’izay. Saingy ny fandraisana anjaran’ny tsirairay no zava-dehibe indrindra fa tsy olom-bitsy no hitondra sy higoka ny fananan’ny rehetra
NAFANA NY LAHADY NAHATOGAVAN’NY FILOHA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 8:45
Ando iray toa zato tokoa ny alahady 26 jolay lasa teo. Vao niposaka ny masoandro dia efa mievoevo ny mponin’i Mahajanga handray ny filoha avon’ny tetezamita. Izao no fitsidihana faharao nataony teto Mahajanga. Tamin’ny 10 ora sy sasany marina no nanitsaka ny tananan’i Mahajanga ny fiaramanidina nandehananan’ ny filoha niaraka tamin’ireo delegasionina nanaraka azy. Isan’izany ny minisitry ny fanjarianan’ny tany sy ny fanampariahana, ny misitry ny fampianarana ary ny minisitry ny fifandraisana sy ny teknôlôjia. Rehafa vita ny fandraisana makotrokotroka ny filoha teny amin’ny seranam-piara-manidina, dia lasa nizotra nankany amin’ny kianjan’i Rabemanajara ny filoha sy ireo delegasiona, narahin’ny vahoaka sy ireo olo-manan-kaja maro. Teny dia nifandimbiasan’ireo manam-pahefana ny fitenenana. Ny ben’ny tananan’ny Mahajanga no nanokatra ny kabary, izay narahin’ny andriamatoa Hamad, filohan’ny federasionina ny baolina kitra Malagasy. Izy indray dia nisaotra manokana ny filoha noho ny fanohanany ny federasionina ny baolina kitra. Avy eo dia ny lehiben’ny faritra indray no nandray ny kabary. Tamin’io dia nanararaotra nametraka ireo fangatahana ho an’ny faritra tamin’ny filoha ny tenany. Isan’izany ny fanamboarana ny lalana sy ny mikasika orinasa SIRAMA ao namakia. Ary tsy hadinon’ny lehiben’ny faritra boeny tamin’io ny nanainga ny filoha mba hirotsaka ho isan’ny kandidà amin’ny fifidianana ho filoham-pirenenana. Raha viat izay, dia ny solotenan’ny FIFA, andriamatoa Cyril Loisel, indray no nadry ny fitenenana. Ity farany dia nanambara fa ity kianjan’ny Rabemananjara ity dia isan’ireo lova apetraky ny FIFA ho an’ny firenena afrikanina. Nanamafy koa izy fa tsy afaka handeha ny kitra Malagasy raha tsy mandray anjara lehibe amin’izany ny fanjakana, ny sponsor ary ny haino aman-jery. Mba ho mariky ny fiaraha-miasa indrindra ary, dia nisy “pasasation de fanion” avy tamin’ny solotenan’ny FIFA ho an’ny filoha. Tao aorian’izay iondray dia ny filohan’ny tetezamita Andrinirina Rajoelina indray no nandray ny kabary. Maro ireo zavatra nasian-teny saingy raha fehezina amin’ny teny fohy izany dia nanome toky ny mponin’ny Mahajanga sy ny vahoaka Malagasy iray amnontolo izyfa hamapandroso ny kitra Malagasy araka izay tratrany. “manomboka mason’andro androany dia dia raisin’ny fanjakana Malagasy an-tananana ny fanohanana ny baolina kitra Malagasy” hoy izy hentitra dia hentitra. Raha vita ny kabarin’ity farany dia niroso tamin’ny fametrahana ny vato fototra ho fanaboarana ny “tribune”nan’I Kianja Rabemanajara ny filoha. Izay no namarana ny tapany voalohany. Ny hariva dia ny ady baolina kitra famaranana, izay niadiaan’ny faritra analamanaga sy faritra boeny no natrehin’ny filoha. Alina vao nisaraka satrai niady dia niady tokoa ny baoli izay nadresen’ny tompon-tanana, dia isika teto amin’ny faritra boeny izany. Reharehan’ny Malagasy tokoa fahiny ny fahaizantsika milalao baolina kitra. Inona fa mbola hiverina ny lasa.
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 9:39
La pose de la première prière pour la réhabilitation de la tribune centrale a été faite durant le passage du président de la Hat Andry Nirina Rajoelina à Mahajanga le 26 juillet dernier. Effectivement, d’ici 5 mois, une nouvelle tribune aux normes international va se dresser dans ce fameux stade. Après le terrain synthétique, unique à Madagascar et qui fait la fierté de la région Boeny, une tribune central va d’ici la fin de l’année changer le look du stade Rabemananjara. Sa réhabilitation sera en totalité financée par la FIFA, une tribune estimée à 400 000$ face à la pelouse synthétique qui a valu 800 000$. Selon le dire du représentant de la FIFA Cyril Loisel présent pendant la cérémonie du Dimanche dernier, ce terrain est parmi l’héritage laissé par la FIFA pour le continent africain. Certes, la fédération a beaucoup soutenu le foot-ball malagasy. La nouvelle tribune va pouvoir accueillir jusqu’à 1000 personnes. D’une superficie de 650m2, elle sera composée de 5 vestiaires, ceux-ci spécialement pour les joueurs et pour les arbitres. En outre, il y aura 3 bureaux qui fera usage de renseignement et de bureaux des différents services administratifs. Une salle de réception et enfin une salle VIP seront aussi érigés. Tous les travaux seront confiés à une entreprise locale qui n’est autre que l’ E.G.C. Hatim de la ville de Mahajanga. De son côté, la société Telma de Madagascar aura aussi du pain sur la planche. Il va s’assurer la confection et la pose des grilles de protection, séparant les spectateurs et le terrain. Avec le nouveau visage que va avoir le stade Rabemananjara très bientôt, la population majunguaise va en tirer les profits et se tourneront plus vers le foot. Cela lui vaudra d’être le patrimoine de la région Boeny, vivier mythique des meilleurs joueurs de foot.
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 10:37
Misavorovoro ankehitriny ny fiainam-bahoaka monina ao an-drenivohitra ao, ary mipaka hatra aty amin’ny faritany izany. Taorian’iny asa fampihorohoroana izay nitranga tany Antananarivo ny Sabotsy lasa teo iny dia voamaika nitombo ny tebitebim-bahoaka. Toa mihombo hatrany ny habibiana vitan’ny Malagasy samy Malagasy. Nisy aina nafoy indray mantsy tamin’io, Malagasy mpiray tanindrazana tamintsika ihany ireo. “Efa miova ny toe-tsaintsika fa hadino sahady ny fankamamiana ny fihavanana izay nireharehana teo aloha” hoy i col Razafindrakoto Jean-Bruno, komanda ny zandarimariam-pirenena raha nivahiny tamin’ny fahita lavitra iray izy. Mahavaky vava ny maro tokoa aloha ny zava-misy satria Malagasy samy Malagasy ihany ve dia sahy mifamono sahala amin’izao.“Efa habibiana anie raha asa fampihorohoroana izany no ampiharina eto amin’ny tanindrazana”, hoy ihany ity mpitandron’ny filaminana ity nanamafy hatrany ny fanazavany. Sanatria tokoa ve i Madagasikara dia hitovy amin’i Bagdad sy Irak. Raha izao no mitohy dia mety izay mihitsy no hiafarany. Raha amin’ny ankapobeny no jerena dia hita fa misy raorao pôlitika ao ambadik’izao asa fampihorohoroana izao. Tsy azo lavina mantsy fa misy ifandraisany amin’ny krizy pôlitika teto amin’ny firenena izao rehetra izao. Araka ny nambaran’ny col Ravalomanana Richard indray anefa, izay commandant de la circonscription de la GN Antananarivo, dia nanamafy izy hoe “izahay tsy mijery izay lafiny ara-pôlitika mety hifandray amin’izao raharaha izao mihitsy fa ny fiarovana ny vahoaka mpiray tanindrazana no ataonay vain-dohan-draharaha” hoy izy hentitra dia hentitra. Ity farany mantsy no miandraikitra ny fikarohana sy fanadihadiana rehetra mikasika ity asa fampihorohoroana ity. Midika izany fa izay ahatrarana ny marina hatrany no tanjon’izy ireo fa tsy voabaiko ny lafiny ara-pôlitika tsy akory. Toa sarotra amin’ny tena Malagasy tokoa ny mandinika ny zava-mitranga eto amin’ny firenenana. Hay ka misy Malagasy sahy mamono ny iray rà sy iray tany ilevenana aminy ihany. Ho an’ny tombotsoan’iza anefa no anaovana izany.
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:26
aza gaga nareo ra otran’ny oe serieuz be le articl avokak fa ny vao2 avokak amin’ny gazety iany io « ino vaovao Mahajanga » ok mazotoa daol
FILOHA AVON’NY TETEZAMITA TSY FILATSAHAKO NA TSIA NO ZAVA-DEHIBE
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:10
Fanontaniana manaikitra ny sain’ny vahoaka Malagasy rehetra ny hoe “hilatsaka ho filoham-pirenena ve ny filohan’ny tetezamita ankehitriny Andry Rajoelina sa tsia ? Nandritra ny dinidinika niarahany tamin’ireo mpanao gazety namana anefa dia nanindry mafy izy hoe “tsy ny ilatsahako ho filoham-pirenena na tsia aloha izao no lohalaharana” hoy izy nanazava. Araka ny hevitry ny filoha izany dia tsy tokony izany aloha no mahamaika ny vahoaka. Fantatra mantsy nandritra io dinidinika io fa ny fampandrosoana ihany aloha izao no tokony hifotorana. “ny fampandrosoana an’i Madagasikara aloha izao no tokony himasoana” hoy izy nanazava tamin’ireo mpanao gazety. Mety tsy ho ela mantsy dia hatao ny fifidiananana filoham-pirenena eto amintsika ka izany angamaba no maha velom-panontaniana ny olona. Raha ny fikasan’ny fitondrana aza dia afaka dimy volana dia hatao ny fifidianana. Atao mangarahara izany ka izay tena safidim-bahoaka tokoa no tsy maintsy havoaka. Na hirotsaka na tsy hirotsaka izany ny filoha ankehitriny dia ny fampandrosoana an’i Madagasikara ihany no tanjona hatreto. Nilaza koa izy fa na hahazo fanampiana na tsia avy any ivelany aza isika dia tsy maintsy mandroso hatrany no tanjona.ny vahoka Malagasy no tompon-teny farany amin’ny ho avin’ny Madagasikara hoy ny filoha avon’ny tetezamita.
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 2:41
Toa manaitra ihany satria zavatra iaraha-mahita eny anivon’ny fiaraha-monina ny fotombon’ireo mpangataka eraky ny tanàna. Tampotampoka teo mantsy dia naniry sahala amin’ny anana eraky ny renivohitr’i Mahajanga ireo mpangataka. Na ireo mipetraka amoron-dalana izany na koa ireo mandehandeha dia lasa hita eto amintsika daholo. Taloha mantsy, tsy dia mbola tsikaritra loatra sahala amin’izao ny hamaroan’izy ireo. Mahalana fahiny ny nahitana mpangataka raha eto Mahajanga renivohitra no resahina. Ankehitriny anefa, iny sisin’arabe mahitsy ny vy lava iny dia lasa misy mpangataka mitsitokotoko. Eny Mahabibo sy Majunga-be koa dia ahitana azy ireo. Amin’ny ankapobeny dia ireo lahy antitra sy vavy antitra na koa ireo sembana no tena hita eny amoron’arabe. Tsy manana mpiahy intsony angamba ka eny amoron-dalana sisa no iafarana. Ny sasany indray, izay toa somary mahasadaikatra ny saina ihany ny mieritreritra azy, ankizy madinika no mandeha mangataka etsy sy eroa. Mampanontany tena hoe ny ray aman-dreniny ve no maniraka azy ireo hanao izany. Mihevitra angamba izy ireo fa manana fiantrana bebe kokoa ny olona raha ankizy no tonga mangataka eo aminy. Ankehitriny, hatreny amin’ny bord dia lasa feno mpangataka. Raha mba mitsangatsangana eny ny hariva dia tena mahita ireo ankizy madinika mitety ireo olona mipetrapetra hangatahana. Ity koa anefa no tena loza, misy amin’ireo ankizy sasany rehefa handeha hianatra dia mangataka. Ny ankamaroan’izy ireo dia mitaraina fa tsy nihinana sakafo mihitsy alohan’ny handehanany mianatra. Indraindray toa tsy mampino satria efa lasa fahazarana mihitsy izany. Isan’andro isan’andro dia sahala amin’izay foana. Tsy fantatra intsony izay tena marina. Mafy tokoa aloha ny fiainana niainatsika nandritra ireny korontana ireny sy iainantsika ankehitriny. Hita fa mihasahirana ny vahoaka Malagasy saingy fantaro fa tsy vahaolona mihitsy ny fangatahana. Tsy hoe sanatria ny vava ladian’ny lela manome tsiny ny mahantra, saingy raha mbola misy azo atao dia mba aleo ny hatsembohan’ny tava ihany no mba hisokafan’ny vava.